मानिसहरूले परमेश्‍वरका वचन जति धेरै ग्रहण गर्दछन्, उनीहरू त्यति नै धेरै प्रबुद्ध हुन्छन् र परमेश्‍वरलाई चिन्ने आफ्ना खोजमा तिनीहरू त्यति नै धेरै भोकाउँछन् र तिर्खाउँछन्। परमेश्‍वरका वचन आत्मसात् गर्नेहरू मात्र प्रचुर र धेरै गहन अनुभवहरू प्राप्त गर्न योग्यका हुन्छन्, र केवल त्यस्ताहरूका जीवन मात्र तिलका फूल झैं निरन्तर फक्रिँदै जान सक्छन्। जीवनको पछि लाग्ने सबैले यसलाई आफ्नो पूर्णकालीन कामका रूपमा लिनुपर्छ; उनीहरूले “परमेश्‍वरविना, म जिउन सक्दिनँ; परमेश्‍वरविना, म कुनै काम गर्न सक्दिनँ; परमेश्‍वरविना, सबै थोक शून्य छन्” भन्ने अनुभूति गर्नुपर्दछ। यसकारण, तिनीहरूले यो पनि संकल्प गर्नुपर्दछ कि “पवित्र आत्माको उपस्थितिविना, म केही गर्नेछैन, यदि परमेश्‍वरका वचनहरू पढ्दा कुनै प्रभाव परेन भने, तब म कुनै पनि कुरा गर्न उदासीन हुन्छु”। तिमीहरूले आफैलाई लिप्त नबनाओ। जीवनसम्बन्धी अनुभवहरू परमेश्‍वरले प्रदान गर्नुभएको ज्ञान र मार्गदर्शनबाट आउँछन् र तिनीहरू तिमीहरूका व्यक्तिपरक प्रयत्नहरूमा छर्लङ्ग देखिने हुन्छन्। तिमीहरूले आफ्ना लागि के माग गर्नुपर्दछ भने, “जब जीवनका अनुभवको कुरा आउँछ, मैले आफैलाई स्वतन्त्र पास दिन सक्दिनँ”।
केही मानिसहरू आफ्ना खोजमा निकै उत्सुकतासाथ लाग्छन्, र तैपनि तिनीहरू सहि मार्गमा प्रवेश गर्न असफल हुन्छन्। यो यसैले हो कि तिनीहरू धेरै लापरवाही हुन्छन् र आत्मिक कुराहरूमा ध्यान दिँदैनन्। परमेश्‍वरका वचन कसरी अनुभव गर्ने भन्ने तिनीहरूसँग कुनै विचार छैन, र पवित्र आत्माका काम र उपस्थिति के हुन् भनेर थाहा छैन। त्यस्ता मानिसहरू उत्सुक तर मूर्ख पनि हुन्छन्; तिनीहरू जीवनको पछि लाग्दैनन्। त्यो किन हो भने तँसँग पवित्र आत्माको थोरै ज्ञानको पनि अभाव छ, पवित्र आत्माको नित्य चलिरहने कामको विकासका बारेमा तँलाई केही थाहा छैन र तँ आफ्नै आत्माको स्थितिका बारेमा अनभिज्ञ छस्। के त्यस्ता मानिसहरूको विश्‍वास मूर्खतापूर्ण किसिमको विश्‍वास होइन? त्यस्ता मानिसहरूले जतिसुकै खोजी गर्दा पनि अन्ततः केही प्राप्त गर्दैनन्। कुनै पनि मानिसको परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासमा जीवन वृद्धि प्राप्त गर्ने कुञ्जी भनेको नै तेरो अनुभवमा परमेश्‍वरले के काम गर्नुहुन्छ भन्ने जान्नु, परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन हेर्नु, र परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्नु हो, जस्तो कि तँ परमेश्‍वरका सबै व्यवस्थाप्रति आस्थावान् छस्, परमेश्‍वरका वचन तँमा प्रवेश गरेका छन् ताकि तिनीहरू तेरो जीवन बनुन् र यसरी परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट बनाउन सकियोस्। यदि तेरो विश्‍वास मूर्खतापूर्ण विश्‍वास हो भने, यदि तैँले आत्मिक विषयहरूमा र तेरो जीवन स्वभावमा हुने परिवर्तनहरूमा ध्यान दिँदैनस् भने, यदि तँ सत्यतर्फ कुनै प्रयत्न गर्दैनस् भने, के तैँले परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्न सक्‍नेछस्? परमेश्‍वरले के भन्नुहुन्छ भनेर यदि तैँले बुझ्दैनस् भने, तब अनुभव गर्न तँ असक्षम हुनेछस् र त्यसपछि अभ्यास गर्ने कुनै मार्ग हुनेछैन। जब तैँले परमेश्‍वरका वचनको अनुभव गर्छस्, तब तैँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तिनले उत्पन्न गर्ने प्रभाव हो, ताकि तैँले परमेश्‍वरलाई उहाँका वचनबाट चिन्न सक्। यदि तँ केवल परमेश्‍वरका वचन पढ्न मात्र सक्छस्, र तिनलाई कसरी अनुभव गर्ने भन्ने जान्दैनस् भने, के यसले तँलाई तँ आत्मिक विषयहरूमा अनभिज्ञ छस् भन्ने देखाउँदैन? अहिले, अधिकांश मानिसहरू परमेश्‍वरका वचनको अनुभव गर्न असक्षम छन् र त्यसकारण तिनीहरू परमेश्‍वरको काम जान्दैनन्। के यो तिनीहरूको अभ्यासको असफलता होइन र? यदि तिनीहरू यसैगरी चलिरहे भने, कुन विन्दुमा तिनीहरूको प्रचुर परिपूर्णतामा कुराहरूलाई अनुभव गर्न र तिनीहरूको जीवनमा वृद्धि हासिल गर्न तिनीहरू सक्षम हुनेछन्? के यो केवल खाली कुरा गर्नको लागि मात्र होइन? तिमीहरूमध्ये धेरै केवल सिद्धान्तमा मात्र केन्द्रित छौ, जसले आत्मिक विषयहरूका बारेमा केही जान्दैनौ, तर अझै पनि परमेश्‍वरद्वारा महान् उपयोगीका रूपमा प्रयोग गरिन र परमेश्‍वरद्वारा आशिष प्राप्त गरिन चाहन्छन्। यो सम्पूर्ण रूपमा अवास्तविक हो! त्यसकारण, तिमीहरूले यस असफलताको अन्त्य गर्नुपर्दछ, ताकि तिमीहरू सबै आफ्नो आत्मिक जीवनको उचित मार्गमा प्रवेश गर्न, वास्तविक अनुभवहरू प्राप्त गर्न र परमेश्‍वरका वचनको वास्तविकतामा साँच्चिकै प्रवेश गर्न सक।